Into yokuqala umntu abujonga ngayo xa udibana, kubhekise ubuso, oko kukuthi, kwamehlo. Nika ingqalelo ngelinye ilanga, ukuba iliso liwa ngokuchanekileyo kwindawo ejikeleze amehlo nakubomvu kufuphi nemida. Ngokuqhelekileyo, loo mibimbi ayineminyaka yobudala kunye nabantu abadala kakhulu. Inyaniso kukuba liphakathi kwamehlo kunye nokufutshane kweso sikhumba esincinci kakhulu, siyakhathalela naziphi na iimpembelelo. Kule ndawo, ubuso obunamahlunu obuqinileyo obunokululula ulusu, ngokunjalo nangona ubudala, abaninzi banokubona imibimbi kwiinkalo zamehlo.
Ngaphezulu, inkqubo yokunciphisa i-cantus yangaphandle ivela, i E. iimbombo kunye nomphumo nangomntu onamileyo novuyo amehlo abukeka ekhathele. Ewe, amehlo abuzibuko zobomi bethu, isimo sethu somzimba nesimo sengqondo, impilo, kubonakala kwiso, kwaye kugxininiswa yinxalenye ebonakalayo ecaleni kwamehlo. Namhlanje, le ngxaki inokulungiswa ngokulula ngoncedo lwe-cantopexy, ngokuqinisekileyo, akuyona into ebalulekileyo yokwenza ukuba umfana ukhangeleke kwiminyaka engama-70, kodwa ukuba unobunzima obungabikho kwiminyaka, kufuneka uqikelele ukuwaphelisa.
Cantopexy, yintoni na kwaye kutheni?
I-Cantus yinkangala yangaphandle yelihlo, kule ndawo iindawo ezincinci zeetonon, ngoko ke, ngokuhamba kwexesha, ingakumbi xa umntu ehlala ephazamisa, alula kwaye ayenze imibimbi emide. Ngenxa yoko, iimbombo zamehlo zibonakala zingabonakaliyo, zenzeke ngathi zibukeka zibuhlungu. Ngendlela, i-cantus inokuphazamiseka, iyabonakala ngokubhekiselele kwimibono yabantwana, xa iincinci zentsana zincinci. Oku kulungiswa ngophando lweplastiki, ebizwa ngokuba yi-cantopexy, ngoncedo lwayo, iinqununu ezisezantsi zinyuka ziwa. Ngamanye amaxesha, kwiimeko eziyinkimbinkimbi, kufuneka ukuba i-kantoplasty, le yilapho inxalenye yokugqibela yecantus, engenawo ndawo yokusula, isuswa kuphela. Namhlanje, oku kuyinto eqhelekileyo, ngokuncedisa i-cantoplasty ungatshintsha ukuma kwamehlo. Ngamanye amaxesha kuyimfuneko kwizifo, xa ngenxa yokugula kwamehlo ajikeleza kakhulu, kufuneka ahluthe kancane. Ungaphinda uqine ijwabu eliphantsi, eliphantse libabande abantu abadala. Ngokuqhelekileyo oku kwenziwa nge-ectropion yesifo, xa i-vekivovorachivaetsya ngaphandle.
Ngelishwa, akunakwenzeka ukuphelisa ukungaphumeleli kwenkophelo, nokuba uhlala uzibukela, ukwenza iinkqubo ezahlukeneyo zokuzicoca. I-Skin okanye i-eyelid drooping isuswa kuphela ngophenyo lwezonyango. Ukuba ubeka bucala ubuhle kwaye uthetha ngezibonelelo zalo msebenzi, unceda abantu abaqhaqhaqhayisayo ukukhusela ukuphuhliswa kwamehlo. Iyenzeka ngokwayo, okanye emva kokunikezelwa kwegazi, le yinkqubo enje yejwabu leso.
Namhlanje, kunokufumaneka ukuba emva kokwenza i-lobaroplasty, ngokukhawuleza unokwenzela ukunyusa ijwabu lezantsi, kwaye emva kokuhamba kwe-cosmetic facelift (ipopofilling), i-cantopexy iyasebenza. Ngokuxhomekeke kwesikhumba somntu, iziphumo zomsebenzi zigcinwa ixesha elide, ukususela kwiminyaka emi-5 ukuya kwe-10.
xa iimbombo zamehlo zinciphisa, kungakhathaliseki ubudala, okanye ekuzalweni;
xa izikhwama zenziwa phantsi kwamehlo, kunokuthi kube yindoda yokutya okanye i-fatty deposition, nakweyiphi na imeko i-cantopexy idonsa iindawo ezixhamlayo zeelesi;
Kwimeko apho ulusu lweelusiki ezantsi loluliwe;
ngamanye amaxesha ngenxa yokukhubazeka okanye nge-pyloroplasty engaphumelelanga ijwabu eliphantsi, akukho ndlela yokuphepha i-bezantopexy;
kunye ne-myopia, xa ukuqala kwamehlo kuqalisa;
ngamanye amaxesha abantu bafuna ukutshintsha ukutyunjwa kwamehlo, yenza amehlo enkati, kodwa oku akukho mfuneko;
ukupheliswa kwekhenkethi yokukhathala, kudla rhoqo ngabadala;
maxa wambi kuyadingeka ukuba buthathaka.
xa isifo sisesigxina seburhulumenteni okanye kwisifundo esingapheliyo;
kwiimeko, ukuba igazi alixhomekekanga kwaye ngokubanzi ukulahleka kwegazi;
uxinzelelo olunzulu lwe-intraocular kunye nesifo;
kwimeko yesifo sikashukela;
ngomile omeleyo we-mucosa iso;
ukuba umntu uyagula nge-conjunctivitis okanye ene-inflammation engapheliyo kwamehlo;
Kwakhona akunakwenziwa ngeentsholongwane zomzimba.
Ngaphambi kokuba kusebenze ukusebenza, isiguli kufuneka sidibane nodokotela ogqirha kunye ne-ophthalmologist. I-ophthalmologist kufuneka ihlolisise i -odods okanye iqhagamshelana neelensi esetyenziswayo isiguli. Iimvavanyo ezinqunyelwe i-spisokraznyobraznyh ezifuna ukuhamba ukuze zifumane umfanekiso opheleleyo wezempilo, kunokubonakaliswa ukuchasene. Uhlalutyo, ngokuchaseneyo, lubonisa ukuba isigulane asiyidingi into ekhethekileyo, eya kuyenza ukuba isebenze, kwaye kunceda ukhethe indlela efanelekileyo.
Nangona le nto isebenza rhoqo, ibhekisela kwizinto ezinzima, idinga ubugcisa nokuchaneka kumgqirha ogqirha. Utyando lusempilweni, ngokuphindaphindiweyo ludlulela i-anesthesia yendawo, kodwa ngamanye amaxesha benza i-anesthesia jikelele.
Ngaphezulu kwesosikhwelo esiphezulu yintsipho, apho kuqhutyelwa khona ukuqhuma kwinqwelo ejikelezayo, apho i-canthus isolula khona. Kwimeko apho oku kwenziwa kunye ne-blepharoplasty, ke iintsimbi ezongezelelweyo ziqhotyoshelweyo ezifakwe kwi-periosteum. Kule meko, kusetyenziswe isisombululo esikhethekileyo, ukuvumela ukuba kubone iinkcukacha ezincinci, kunye nemicu ezayo. Emva kokusebenza, i-incision engqambileyo igxininiswe, ikhuphe ngokukhawuleza kwaye, ngokuqwalasela i-fold fold, ayibonakali. Isiphumo sokugqibela siya kubonakala emva kweentsuku ezingama-6-8, xa isifo se-postoperative siphelile.
Ukuba umsebenzi ujongene nokugqithisa kwesikhumba se-eyelidi esezantsi, kulo mzekelo, ikhonkco elongezelelweyo lesikhumba lisuswa kwikona liso, kwaye ke amasayithi adibaniswa kunye, ngoko ke ukuphakanyiswa kuyafumaneka. Ukusebenza kuthatha ixesha elincinci, ubuncinane iyure, ubuninzi bebini, emva koko isiguli singaya ekhaya, unyango lwangaphandle alufunwa. Emva kwithuba elithile, ngenxa yokuguga ngokwemveli, umsebenzi uya kufunwa kwakhona. Ukongezelela, kufuneka ukwazi ukuba iingcingo zengqungquthela ngokwazo azipheli kunye ne-cantopexy.
Emva kokuhlinzwa, i-membrane ye-mucous kunye nenxalenye yesikhumba ephazamisekile. Ngenxa yoko, ukukhukhula okuqinileyo kunye nokuqhaqhabalaza kubonakala, i-Iconsulant ye-mucous iyavutha, kwaye iindawo zeempahla eziqhekekileyo zibonakala. Kodwa iyadlula ngokukhawuleza, inqabana enqamlekileyo yinto encinci kwaye ayibonakaliyo kwindoda. Ukubuyiselwa okupheleleyo akudluli kwiintsuku ezili-10, kodwa umphumo ubonakala ngokukhawuleza, awukho ukulungelelanisa, kwaye ikhoneni liso liphakama.
Njengomthetho, ayenzeki, kodwa ngamanye amaxesha kwenzeka:
Ngenxa yomsebenzi oqaqambileyo wegqirha onogqirha unokuhlala unobungozi obunzima;
kwimeko yokutshintsha kwesohlwayo kwamehlo, kunokubakho ukulungiswa okugqithisileyo okanye okungenangqiqo;
umthungo unokuba lukhulu;
kwaye kunjalo, isigulane sinokungonwabi.
Namhlanje, amaxabiso e-cantopexy ayamkeleka, ukusuka kuma-ruble ama-15 ukuya kuma-20 ayi-ruble.
Iqhosha lesibini: indlela yokujongana nayo?
I-Turkey yabhaka ehovini
I-Podolskaya kunye noPynyakoakov bafumene umntanama onyana oza kuzalwa
Yintoni elindele uAries ngo-2014
I-Monogram kwiisilumkiso: ii-step-by-step photos zaqalayo
Imfazwe yendawo ekhitshini: i-steamer okanye i-multivarker?
Inkqubo yokuqhawula inkundla kwinkundla 2009